Onye Minista njem nlegharị anya nke Jamaica na -aga Portugal maka ọgbakọ ụwa niile dị mkpa
Home » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ gbasara Jamaica » Onye Minista njem nlegharị anya nke Jamaica na -aga Portugal maka ọgbakọ ụwa niile dị mkpa
Na-agbasa News Travel • Caribbean • Akụkọ Ọchịchị • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Akụkọ gbasara Jamaica • nzukọ • News • ndị mmadụ • Akụkọ na -agbasa ozi na Portugal • Ịrụ ọrụ • Tourism • Okwu Nlegharị Anya
Minista na -ahụ maka njem nlegharị anya Jamaica Bartlett ka ha kparịta maka njem ga -adigide na nnọkọ na Portugal
Minista njem nlegharị anya nke Jamaica, Hon. Edmund Bartlett, atọrọla isonye na “A World for Travel-Évora Forum” nke a na-atụ anya ya nke ukwuu, mmemme ụlọ ọrụ njem na-adigide zuru ụwa ọnụ nke emere na Septemba 16 na 17 na Évora, Portugal.
Nlekọta ihe omume a bụ Gaa na Portugal, UNWTO, WTTC, na Resilience Global Tourism Resilience na Center nke Nsogbu.
Minista Bartlett ga-esonye na mkparịta ụka nke ọkwa dị elu nke onye nchịkọta akụkọ njem nke CBS News Peter Greenberg na-ahazi.
Ọgbakọ a ga -abịaru nso n'isiokwu ndị dị mkpa maka nkwado.
Eventiz Media Group, ndị otu mgbasa ozi njem kacha ukwuu na France na -ahazi ihe omume a, na mmekorita ya na Global Travel & Tourism Resilience Council. A na-akwado mmemme a site na nkwado nke Portugal, United Nations World Tourism Organisation (UNWTO), World Travel and Tourism Council (WTTC), na Jamaica nke dabeere na Global Tourism Resilience na Crisis Management Center (GTRCMC).
Ọ ga -akpọkọta ndị isi ụwa, site na ngalaba ọha na nkeonwe, ka ha kwurịtara ụzọ ha nwere ike isi gbanwee ụlọ ọrụ njem na njem nlegharị anya wee nyochaa ụzọ dị n'ihu na -eme ka ụlọ ọrụ njem na -adigide.
Njem nleta Jamaica Minista Bartlett atọrọla isonye na mkparịta ụka okirikiri nke “Covid-19: Ngalaba na -eguzogide na -anya ụgbọ ala na -emekọrịta ihe na ọchịchọ ndị ndu ọhụụ, ”Peter Greenberg, onye nchịkọta njem na CBS News na -ahazi ya. Nnọkọ a ga -enyocha ka gọọmentị na ụlọ ọrụ na -esi ebido idu ndú n'otu ụzọ na -enye ohere ka ngalaba ahụ metụta amụma.
Onye ozi ahụ ga-esonyere Onye Ukwu Jean-Baptiste Lemoyne, odeakwụkwọ nke State for Tourism, France; Onye isi obodo ya bụ Fernando Valdès Verelst, odeakwụkwọ nke State for Tourism, Spain; na Onye isi ala Ghada Shalaby, onye osote minista na -ahụ maka njem nlegharị anya na ihe ochie, Arab Republic of Egypt.
Ndị ọzọ kwuru okwu maka mmemme a gụnyere Prof. Hal Vogel, onye edemede, Prọfesọ akụ na ụba njem, Mahadum Columbia; Julia Simpson, Onye isi ala na onye isi oche, WTTC; Therese Turner-Jones, onye isi njikwa, ngalaba mba Caribbean, Inter-American Development Bank na Rita Marques, odeakwụkwọ steeti Portuguese maka njem nlegharị anya.
Dr. Taleb Rifai, Onye isi oche nke GTRCMC na onye bụbu odeakwụkwọ ukwu nke UNWTO, na Prọfesọ Lloyd Waller, onye isi oche, GTRCMC, bụkwa ndị ekwuputala.
Ndị nhazi ahụ achọpụtala na mbipụta mbụ nke ihe omume a ga -elekwasị anya na ihe ndị dị mkpa na ụlọ ọrụ ebe mgbanwe dị mkpa, na -achọpụta usoro ndị ọ dị mkpa ka ewere na ijikọ usoro a ga -etinye.
Ọgbakọ a ga -abịakwute isiokwu dị mkpa maka nkwado dị ka mgbanwe ụdị akụ na ụba, mmetụta ihu igwe, mmetụta gburugburu ebe obibi njem, mgbanwe n'ụsọ oké osimiri na oke osimiri yana amụma ọrụ ugbo na nke carbon.
Ihe omume a ga-enwe njedebe nke ndị bịara ya na mmadụ 350 mana a ga-agbasakwa ya na ọtụtụ puku ndị nnọchi anya mebere. Minista Bartlett ga -ahapụ agwaetiti a taa, Septemba 14, a na -atụkwa anya ịlaghachi na Septemba 19.
Sandals Royal Bahamian: ihe ohuru ohuru maka dara oke onu ahia ...
Marcy MacDonald ekwu, sị:
September 15, 2021 na 01: 18
Kedu otu m ga - esi bụrụ onye otu Press - debe tiketi pịa?